We Fight We Win. -- " More than Media ": ဟင်းသီးဟင်းရွက်အခေါ်အဝေါ် များ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ၏ အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ်များ.... တဲ့
ဗဟုသုတလေးပေါ့ !ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး.. တနေရာကနေ မလာတာ ..သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ကျွန်မအတွက်ရော.. အားလုံး သိရအောင်ဆိုပြီးတော့ !
ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ၏ အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ်များ..
carrot - မုန်လာဥနီ ( ရှည် မျောမျော ပုံ )
beet root - မုန်လာဥနီ ( အလုံး ပုံ )
White radish / turnip - မုန်လာဥဖြူ အကြီး။
Chinese cabbage - မုန်ညင်းဖြူ ( တရုပ် )
White mustard - မုန်ညင်းဖြူ ( ကြံမဆိုင် )
clove - လေးညှင်းပွင့်
cumin - ဇီယာ။
bay leave - ကရဝေးရွက်။
nut meg - ဇာဒိပိုသီး။
Cinnamon bark - သစ်ဂျပိုးခေါက်။
shallot or small onion - ကြက်သွန်နီအသေးစား။
curry leaf -ပျဉ်းတော်သိမ်းရွက်
pepper corn/ black pepper - ငရုပ်ကောင်း။
celery or chinese persley- တရုပ်နံနံ
coriander leaf/ seeds - နံနံရွက်။ နံနံပင်။
mustard seeds - မုန့်ညင်းစေ့။
mustard leaf - မုန့်ညင်းရွက်။
mint - ပူစီနံ။
tamarind - မန်ကျည်းသီး။
turmeric powder - နနွင်းမှုန့်။
saffron - ဂုန်မာန်။
(copy fr: ထူးထူးဆန်းဆန်း )